Thermo instruementy PC ကို
Windows7နဲ့ Windows XP မှာ password ကိုထွက်ရှာတွေ့ဖို့ကိုဘယ်လို
Mozilla Firefox ကိုအတွက်အမြင်အာရုံ bookmarks ကို restore လုပ်နည်း
Windows 10 ကိုတစ်ဦးမှတ်ဉာဏ်အမှိုက်ပုံ၏ဖန်တီးမှုကို enable လုပ်နည်း
စိတ်ဝင်စားစရာဆောင်းပါးများ - November 12,2019
XLS စားပွဲပေါ်မှာ PDF မှတ်တမ်းထဲမှာပြောင်း
Update ကို PowerPoint
သတင်းစကားတစ်ခု VKontakte ရေးသားဖို့ကိုဘယ်လို
လူမှုကွန်ယက်ကို VKontakte အတွက်အခြားအသုံးပြုသူများထံသို့စာများရေးသားခြင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်အရင်းအမြစ်ကကမ်းလှမ်းရှိသမျှသည်အခြားသောအခွင့်အလမ်းများအကြားနီးပါးအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, မတိုင်းအသုံးပြုသူကျနော်တို့အခြားလူများနှင့်အတူချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ဘယ်လိုအပြည့်အဝကိုသတိထားမိသည်။ ဆောင်ပုဒ်များထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်ခင်မှာ VKontakte ဆကျသှယျဖို့ကိုဘယ်လိုက VK သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကျိုးနပ်သည်။
Photoshop မှာ video file ကိုရန်ကာတွန်း Save
Microsoft က Excel ကိုအတွက်တန်းစီခြင်းနှင့်ဆဲလ်တွေဖျောက်ထားခြင်း
ဆေးတစ်လက်ကို Google က Chrome browser မှာ "ဒီ option ကိုစီမံအုပ်ချုပ်သူကိုဖွင့်ထားပါသည်"
အဆိုပါ hard drive ကိုကွဲပြားခြားနားသောအသံများကို HDD ဆိုလိုနိုငျသောအသံစေသည်
ဗီဒီယိုကဒ်၏မော်ဒယ်ဆုံးဖြတ်ရန် Program ကို
လူအပေါင်းတို့သည်ဒြပ်စင်နှင့်အတူ Microsoft Word ကိုစာမျက်နှာကိုကူးယူ
ကို Activision Blizzard ၏ရှယ်ယာဆင်းရဲသားကြေညာချက်အပြီးစျေးနှုန်းကျဆင်း
Windows 10 ကိုအတွက်ဂိမ်း၏အလိုအလျှောက်ခေါက်နှင့်အတူပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေး
ကျနော်တို့ Windows တွင်အပြာရောင်ဖန်သားပြင်၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေး
စာကြည့်တိုက် d3dx9_31.dll ၏မရှိခြင်းကိုပြုပြင်တာတွေ
"ဟုအဆိုပါအစီအစဉ်ကို d3dx9_31.dll မဟုတ်ပါ run လို့မရပါ": ဒီအမှားမကြာခဏပေါ်လာသောသင် The Sims3သို့မဟုတ် GTA4တူသောဂိမ်းကိုစတငျသညျ့အခါတစ်ခုအားသင်မက်ဆေ့ခ်ျကို box ကိုလက်ခံရရှိတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်စာကြည့်တိုက်ဦးပျောက်ဆုံးနေ - ဖိုင်တစ်ဖိုင်အဆိုပါအမှားကြောင့် DLL ကိုရိုးရိုးစနစ်အတွက်ပစ္စုပ္ပန်မဟုတ်ပါသို့မဟုတ်ပျက်စီးနေသည်ဟူသောအချက်ကိုမှဖြစ်ပေါ် DirectX ကို 9. ၏ installation အထုပ်များတွင်ပါဝင်သည်။
အဆိုပါ modem Yota ပေါ်တွင်အင်တာနက်အမြန်နှုန်းတိုးမြှင့်
ဆယ်လူလာပေးသူ "Skartel" Yota ၏အမှတ်တံဆိပ်အမည်အောက်တွင် operating, စားသုံးသူ၏လူသိကျယ်ပြန့်သည်။ အခြားအမှုအရာတို့ကိုတို့တွင်ကုမ္ပဏီ, USB-modems မှတစ်ဆင့်မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက် access များအတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ Iota အသစ်ကအခြေစိုက်စခန်းဘူတာတည်ဆောက်နေသည်အစဉ်မပြတ်သူ့ရဲ့ network ကလွှမ်းခြုံတိုးချဲ့နေသည်နှင့် LTE ကိုအပါအဝင်အချက်အလက်အသစ်ကိုဂီယာစံချိန်စံညွှန်းများ, မိတ်ဆက်ပေး။
နောက်တဖန်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းလူကြိုက်များလူမှုကွန်ယက်က iPhone များအတွက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် application ကိုရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်လူကြိုက်များဝန်ဆောင်မှုအတန်းဖော်မှကြွလာသောအခါငါအဘယ်သို့ဆိုနိုငျသညျ။ ဒီနေ့ကို iOS များအတွက် eponymous app ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းအခွင့်အလမ်းများမှာပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ယူပါ။ မိတ်ဆွေများက Odnoklassniki အတွက်မိတ်ဆွေများကိုရှာပါရှာပါမခက်ခဲသည်: app ကိုသင်ဝန်ဆောင်မှု VKontakte ထံမှအဖြစ်အဆင့်မြင့်ရှာဖွေမှုကိုတဆင့်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုစာအုပ်အနေဖြင့်လူမှုရေးကွန်ယက်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသူသည်အသုံးပြုသူများကိုရှာဖွေခွင့်ပြုပါတယ်။
Windows7ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ swap ဖိုင် Creating
Swap ဖိုင်ကို virtual memory ကိုကဲ့သို့သော system component များကို၏လုပျငနျးထံအပ်နှံသော disk ကိုအသံအတိုးအကျယ်ကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာတစ်ဖွဲ့လုံးအဖြစ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်လျှောက်လွှာဒါမှမဟုတ် operating system ကို run ဖို့လိုအပ်သော RAM ကိုကနေဒေတာတွေကိုတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းလှုံ့ဆော်ပေး။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ကြသကဲ့သို့, paging ဖိုင် (pagefile windose7အတွက် swap ဖိုင် Create Windows7အတွက်ဖိုင်ဖန်တီးရန်နှင့် configure ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။
Wi-Fi ကို router ကိုအပေါ်စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲရန်လုပ်နည်း
ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်မှုအမြန်နှုန်းကျဆင်းသွားခဲ့ပြီးအများကြီးနိမ့်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်စုံတစ်ဦးကသင့် Wi-Fi ချိတ်ဆက်။ လုံခြုံရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်, password ကိုအခါအားလျော်စွာပြောင်းလဲသွားရပါမည်။ ထို့နောက် settings ကို reset သွားမည်ဖြစ်ပြီးသင်နှင့်သစ်ကိုခွင့်ပြုချက် data တွေကိုသုံးပြီးအင်တာနက်ကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ Wi-Fi ကိုအထဲက password ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန် Wi-Fi ကို router ကိုအပေါ်စကားဝှက်ကိုပြောင်းဖို့ကဘယ်လို, သင် web-interface ကို router ကိုကိုသွားရပေမည်။
Wi-Fi ကို router ကိုတဆင့်အင်တာနက်အမြန်နှုန်းကိုတိုးပှား
Wi-Fi ကိုမှတဆင့်အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင် အသုံးပြု. အသုံးပြုသူများကောင်းမွန်စွာတစ်ကေဘယ်မှုနှုန်းကနေတဆင့်ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာတစ်ဦးနှုန်းမှာအစီအစဉ်ကိုက်ညီနှင့်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါသိသိသာသာနိမ့်သည်အဘယ်မှာရှိအခွအေနမှလူသိများသည်။ ဒါကြောင့် router ကိုမှုနှုန်းအများအပြားမှသက်ဆိုင်ရာဖြစ်နေဆဲ "ဖြတ်" အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းကိုမေးခွန်း။
Wi-Fi ကို signal ကိုခိုင်ခံ့စေဖို့ဘယ်လို
ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ iPhone ရောင်းချမှုများအတွက်ပြင်ဆင်ထားရန်
သင်၏ Windows PC ပေါ်မှာစာလုံးကိုပြောင်းလဲရန်
အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်စနစ်အတွက် default အနေဖြင့်သတ်မှတ်စတိုင်သို့မဟုတ်စာလုံးအရွယ်အစားကိုကြိုက်မည်မဟုတ်ပါ။ အများဆုံးကွဲပြားခြားနား၏ဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းများ၏အကွာအဝေး: စသည်တို့ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဦးစားပေး, ရူပါရုံကိုနှင့်အတူပြဿနာများ, စနစ်စိတ်ကြိုက်တစ်ဦးအလိုဆန္ဒ, ဤဆောင်းပါး7သို့မဟုတ် 10 windose operating system ကို run နေသောကွန်ပျူတာများအတွက်ဖောင့်ကိုပြောင်းလဲဖို့နည်းလမ်းတွေကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ CIS အတွက် Xerox ၏အမည်တတူကိုရည်ညွှန်းဖို့ပြောရလျှင်ဖြစ်လာသည်, သို့သော်ဤထုတ်လုပ်သူများ၏ထုတ်ကုန်သူတို့ကိုကန့်သတ်မထား - အကွာအဝေးအတွင်းမှာလည်းပစ္စုပ္ပန် MFPs နှင့်ပရင်တာများမှာအထူးသဖြင့်အတွင်း Phaser လိုင်းအသုံးပြုသူများအကြားအလွန်ရေပန်းစားသည်။ အောက်တွင်ကျွန်တော် device ကိုယာဉ်မောင်း Phaser 3010 မှတပ်ဆင်နည်းလမ်းများကိုဖော်ပြရန်။
YouTube ပေါ်မှာစီးဆင်းစေဖို့အတွက် Program ကို
YouTube ပေါ်မှာ LIVE videoblogerov အကြားတွင်အလွန်ဘုံဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောစစ်ဆင်ရေးထွက်သယ်ဆောင်ရန်, အထူးဆော့ဖ်ဝဲကိုသုံးပြီးမကြာခဏလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးအရာကနေတဆင့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုမိမိတို့အကောင့်ချိတ်ဆက်လိုအပ်သည်။ အရေးပါသောသင်နည်းနည်းမှုနှုန်းသည် FPS ညှိနှင့် 2K တစ် resolution နဲ့ဗီဒီယိုများဝေမျှနိုင်မည့်ဤအချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။
Instagram ကိုတစ်ဦးကို tick ရရှိရန်မည်သို့
Instagram ကိုများစွာသောလူများအတွက်တကယ့် Boon ဖြစ်လာသည်: သာမန်အသုံးပြုသူများအမိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူသင်၏အသက်တာ၏အချိန်လေးဝေမျှဖို့ပိုမိုလွယ်ကူလာ, လုပ်ငန်းရှင်များသစ်ကိုဖောက်သည်တွေ့ပြီနှင့်လူသိများတဲ့စရိုက်ကသူ့ပရိသတ်တွေနဲ့နီးစပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲနောက်တဖန်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အတုနှင့်အကကိုမှန်ကန်စာမျက်နှာကြောင်းကိုသက်သေပြနိုင်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းပေါ်လာနိုင်ပါသည် - Instagram ကိုတစ်ဦးကို tick ရရန်ဖြစ်ပါသည်။
လူတိုင်းက BitTorrent protocol ကို အသုံးပြု. ဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်များအတွက်ရေပန်းစားအစီအစဉ်ကိုသိတယ်။ သို့သော်အမျိုးမျိုးသောအရင်းအမြစ်များအပေါ်လွှမ်းမိုးများအတွက်အဆင့်မြင့်ရှာဖွေမှုကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သော application များရှိပါသည်ဆိုရငျကော ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူ HAL Bithal မှအခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကိုတိကျစွာ application ကိုဤအမျိုးအစားကိုရည်ညွှန်းသည်။ HAL ကွဲပြားခြားနားသောခြေရာခံတစ်ဦးကြီးများအရေအတွက်ကအပေါ်ရေစီးခြင်းကြောင့်ရှာဖွေခွင့်ပြုသူတို့ကို built-in browser ၏အကူအညီဖြင့်ထပ်မံဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။
အသုံးပြုမှု AVZ antivirus ကိုအပေါ်လမ်းညွှန်မှု
ခေတ်သစ် Anti-virus software ကိုအပိုဆောင်းလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအမျိုးမျိုးအချို့သောအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုများ၏သင်တန်းကိစ္စများကိုရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းသို့မှသာအားကောင်းနေဝယ်ယူခဲ့ကြသည်။ ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့အကြှနျုပျတို့သညျအလုပျ AVZ antivirus ကိုအပေါငျးတို့သသော့ချက် features တွေကိုပြောပြလိမ့်မယ်။ ရဲ့သင်က AVZ ကိုယ်စားပြုဘာလက်တွေ့ကျတဲ့ဥပမာအပေါ်ပိုမိုဖတျရှုနိုငျပုံကိုကြည့်ပါစို့ AVZ AVZ စွမ်းရည်၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
အိမ်စာမကျြနှာ Mail.ru အောင်လုပ်နည်း
မူလစာမျက်နှာ Mail.Ru ဝန်ဆောင်မှုသုံးစွဲသူကုမ္ပဏီ၏ဝန်ဆောင်မှုရွှေ့နှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များမှတဆင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိရှာဖွေနေ start လျင်မြန်စွာအမျိုးမျိုးအသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်ခွင့်ပြုအများအပြားလုပ်ကွက်ပါဝင်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏ browser ကိုများအတွက်အခြေခံအဖြစ်ဒီစာမျက်နှာကိုတွေ့မြင်လိုပါကအနည်းငယ်ရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများလိုက်နာပါ။
XLS မှ PDF ကိုပြောင်းဖို့ဘယ်လိုပေါ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ကျနော်တို့ပြီးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့ပါပြီ။ အဆိုပါပြောင်းပြန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်, ထိုသို့အများကြီးပိုလွယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကိုလုပ်ငန်းစဉ်၏ပိုင်ထိုက်သောထည့်သွင်းစဉ်းစားကြပါစို့။ ကိုလည်းကြည့်ပါ: PDF ကို-စာရွက်စာတမ်းအတွက် XLS-စားပွဲပေါ်မှာ convert, များစွာသောအခြားပုံစံများနှင့်အတူအမျှ PDF ဖိုင်ရယူရန်နည်းလမ်းများမှ XLS ပြောင်းလဲ XLS မှ PDF ဖိုင်အဖြစ်ပြောင်းလဲနည်း, သင်အထူးပြုအစီအစဉ်များ-converters အဖြစ်, သို့မဟုတ် Microsoft Excel အားဖွငျ့ကိုသုံးနိုင်သည်။
အစိုင်အခဲပြည်နယ် drives တွေကို SSD ကိုအတူလုပ်ဖို့မဟုတ်5အမှုအရာ
အဆိုပါအစိုင်အခဲပြည်နယ် hard drive ကို SSD ကို - သမရိုးကျ hard disk ကို HDD နဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာတစ်ဦးအခြေခံကျကျကွဲပြားခြားနားသော device ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ သမားရိုးကျ hard drive ကိုအဘို့ပုံမှန်ဖြစ်ကြောင်းအရာအတော်များများ, သင် SSD ကိုမပွုသငျ့သညျ။ ဤအမှုအရာတို့ကိုအကွောငျးအကြှနျုပျတို့သညျဤဆောင်းပါး၌စကားပြောပါလိမ့်မယ်။ Windows ကိုစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုဟာ SSD ကိုအဘို့, အကောင်းဆုံး SSD ကို၏အမြန်နှုန်းနှင့်ကြာချိန်ပိုကောင်းအောင်နိုင်ရန်အတွက်စနစ်ထူထောင်ဖို့ဘယ်လိုဖော်ပြထားတယ်ရသော - ဒါ့အပြင်သင်ဟာအခြားပစ္စည်းကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။
ယနေ့အထိမာလမ်းအပေါ်မနှစ်မြို့ဖွယ်အခြေအနေများရှောင်ရှားတစ်ရေကြောင်းမရှိဘဲအဆင်ပြေကားမောင်းကားတစ်စီးစိတ်ကူးရန်။ အချို့ကိစ္စများတွင်အလားတူပစ္စည်းတွေအလွန်ကိရိယာနှင့်အတူအလုပျရိုးရှင်းစွာအရာစကားသံကိုထိန်းချုပ်မှု, တပ်ဆင်ထားကြသည်။ ဒါဟာကျွန်တော်ဤဆောင်းပါးကိုအတွက်နောက်ပိုင်းမှာရှင်းပြပါလိမ့်မယ်, ဤရေကြောင်းအကြောင်းကိုပါပဲ။
Photoshop မှာဓါတ်ပုံပေါ် rounded ထောင့်
ဓါတ်ပုံပေါ် rounded ထောင့်ကအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်ဆွဲဆောင်မှုကြည့်ရှုပါ။ ဤအပုံရိပ်များအများစုဟာတစ်ဦး collage သို့မဟုတ်တင်ပြချက်များအတွက်ပြင်ဆင်မှုအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ ဒါ့အပြင် rounded corner နဲ့အတူဓါတ်ပုံတွေ site ပေါ်တွင်ရေးသားဖို့ပုံစံငယ်များအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကိုယ့်တဦးတည်းနေတဲ့ဓာတ်ပုံကိုရဖို့ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးပေမယ့်လမ်းပါ (ညာ) ကိုသုံးပါ။
အဘယ်အရာကို CCC.EXE လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်တာဝန်ရှိသည်
အဆိုပါဗီဒီယိုကဒ်ကွန်ပျူတာဟာ့ဒ်ဝဲ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်သောဒရိုင်ဘာနှင့် optional ကိုဆော့ဗ်ဝဲနဲ့အပြန်အလှန်ရန်စနစ်နိုင်ရန်အတွက်။ ဗီဒီယိုကဒ်ထုတ်လုပ်သူ AMD ၏ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့အခါ, ထိုကဲ့သို့သော application တစ်ခု Catalyst Control Center ကိုလုပ်ဆောင်တယ်။ သင်တို့သိကြသည်နှင့်အညီ, တစ်ဦးချင်းစီ program ကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောဖြစ်စဉ်များမှကိုက်ညီစနစ်အတွက်ပြေး။
အဓိပ္ပာယ်နှင့် VirtualBox အတွက် port forwarding ကိုထူထောင်
Epson L100 များအတွက်ယာဉ်မောင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး install
ကို Google က Chrome browser ကိုများအတွက်အများစုမှာ VPN ကို-extension ကို
အတော်လေးမကြာခဏကျနော်သူတို့ကွာခြားဘယ်လောက်, (တစ်ဦးနှစ်ဦးထပ်တိုက်တိုင်းပြည်အပါအဝင်) Wi-Fi ကို router သည်အိမ်တော်အဘို့ရွေးရန် သာ. ကောင်း၏ဟုမေးနှင့်မည်သို့ငါးကြိမ်ပိုမိုမြင့်မားသောအရာများ၏စျေးနှုန်းထက်လျော့နည်း 900 ရူဘယ်အဘို့ကိုကြိုးမဲ့ router ကိုပါ၏။ တစ်စုံတစ်ဦးကအငြင်းပွားဖွယ်ထင်ရမဖယ်ထုတ်ပြီးမပေးနေချိန်မှာငါကဤအချက်များကသူ၏အမြင်နှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြောပါလိမ့်မယ်။ ဆက်ဖတ်ရန်
Copyright © 2019 Thermo instruementy PC ကို
https://termotools.com my.termotools.com © 2019